Ọtụtụ ndị ọrụ VK choro ịzobe ọnọdụ alụmdi na nwunye ha, ma ha amaghị otú e si eme ya. Taa, anyị ga-ekwu banyere ya. Idobe ọnọdụ alụmdi na nwunye Na-ejuputa na profaịlụ nke VKontakte, ị ezipụtala ebe dị iche iche gbasara onwe gị. Otu n'ime isi ihe bụ ọnọdụ alụmdi na nwunye. Ka e were ya na ị gosipụtara ya, ma mgbe oge ụfọdụ gasịrị, ha chọrọ iji zoo ya anya.
Esi zoo ndị na-eso VK
Ọnụ ọgụgụ zuru oke nke ndị ọrụ nke netwọk mmekọrịta dị na VKontakte, n'ihi mgbakwunye nke ndị mmadụ na ndepụta ndị debanyere aha, ihe ijuanya banyere usoro nke ịchekwa ndepụta a. Na nke a, enwere ndụmọdụ ole na ole. Anyị na-ezo ndị debanyere aha VK Ugbu a, n'ime usoro nke saịtị ahụ. VK netwọk bụ ụzọ abụọ dị mkpa jikọtara na ịnweta ndenye aha.
Anyị kpochapụ mgbidi VKontakte
Achọrọ ka ihichapụ ihe ndekọ sitere na mgbidi VKontakte bụ ihe kwere nghọta, mana nchịkwa nke netwọk mmekọrịta a adịghị elekọta ilekọta ọrụ pụrụ iche iji kpoo mgbidi ahụ. N'ọtụtụ ọnọdụ, ndị ọrụ ga-enweta ikike ndị ọzọ. O kwesiri iburu n'uche na na oge na-adịbeghị anya na saịtị VK.
Otu esi ege egwu n'abughi VKontakte
Ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ọrụ nke netwọk mmekọrịta VKontakte na-ejikarị naanị nzube a gaa - iji gee egwu. Otú ọ dị, n'ihe gbasara ihe ndị chọrọ maka ọrụ na-adịgide adịgide nke ihe nchọgharị Ịntanetị na nsogbu nke onye ọkpụkpọ ọkpụkpọ, ọ nwere ike ịdị mkpa iji gee ntị na ihe ndekọ na-enweghị nleta VK.
Esi kwalite otu VKontakte
Taa, ọtụtụ ndị ọrụ nke netwọk mmekọrịta bụ VKontakte na-arụsi ọrụ ike iji akụ a abụghị maka ntụrụndụ, kama maka ego. Nke a bụ eziokwu na nchịkwa nke VK na-enye ohere dị ukwuu maka ndị mgbasa ozi, nke a, yana ọnụ ọgụgụ dị elu nke ndị na-abịa, nwere ike iwetara ọnụ ọgụgụ dị ukwuu kwa ụbọchị.
Gịnị mere egwu egwu VKontakte
Nsogbu ndị ọrụ metụtara ọdịda nke ọrụ ọ bụla nke netwọk mmekọrịta bụ VKontakte bụ ihe na-emekarị ma bụrụ nke siri ike na-apụta ọ bụghị naanị na saịtị a, kamakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ọdịdị nke omume malfunctions nwere ike ime otu ihe ahụ na-agụnye inoperability nke usoro wuru maka ịge egwu na ịntanetị.
Mechie mgbidi VKontakte
Imechi mgbidi nke gị na ibe na netwọk mmekọrịta. VKontakte bụ usoro nkịtị maka ọtụtụ ndị ọrụ. A na-eme nke a n'otu ụzọ ahụ, n'agbanyeghị ihe kpatara ya mere ka ị nwee mkpa a. Na usoro nke mmejuputa atumatu site na ntuziaka, ị ga-enwe ike zoo kpamkpam ihe ọ bụla dị na mgbidi nke profaịlụ gị site na ụfọdụ ndị ọrụ.
Gịnị mere egwuregwu VKontakte anaghị ejide?
Ọtụtụ ndị ọrụ na-arụsi ọrụ ike nke netwọk mmekọrịta VKontakte na-echekarị nsogbu gbasara nbudata nke ngwa ma ọ bụ ọzọ na saịtị ahụ. N'isiokwu a, anyị ga-akọwa n'ụzọ zuru ezu ihe kpatara ụdị nsogbu a, yana inye ụfọdụ aro banyere otu esi edozi usoro nbudata egwuregwu.
Ebe ọ bụ na ezigbo ọchị ọ bụla na netwọk mmekọrịta bụ VKontakte bụ akụkụ nke ọdịnaya ederede, ịnwere ike idetuo na mado ya. Banyere nuances niile nke usoro a, anyị na-akọwa n'okpuru ebe a. Iṅomi ma na-ekesa VK smilies Na weebụsaịtị VK, onye ọrụ ọ bụla nwere ike iṅomi na mado ọ bụla emoji n'enweghị ihe mgbochi ọ bụla, nke kachasị mkpa mgbe ị na-ebufe nnukwu ihe ndekọ.
Anyị na-ezobe ndị isi nke VKontakte
Ọtụtụ mgbe, ndị ọrụ nke netwọk mmekọrịta bụ VKontakte, ndị nchịkwa ọ bụla dị na tebụl ọha mmadụ, kwesịrị zoo otu ma ọ bụ ọtụtụ ndị ndú nke obodo ha. Ọ bụ banyere otu esi eme nke a, anyị ga-akọwa n'isiokwu a. Izobe ndi isi ulo ozo Kwa oge, nyochaa mmelite nke oru VC na nso nso a, enwere uzo abuo abuo maka iziputa ndi ndu obodo.
Esi dee onwe gị VKontakte
Onye ọrụ ọ bụla na-anwa iji atụmatụ niile nke netwọk mmekọrịta. Na mgbakwunye na idegara ndị enyi ya na ndị ọrụ ndị ọzọ ozi onwe ya, VKontakte gosipụtara ọrụ dị nnọọ mfe maka ịmepụta mkparịta ụka n'onwe ya. Ọ bụ ezie na ndị ọrụ ụfọdụ ejiriwo akụkụ a bara uru, ndị ọzọ echeghị na nke a ga-ekwe omume ma ọlị.
Gbanyụọ search nchebe
Na ndabara, VKontakte nwere nchedo echekwara, ya mere enweghi ike ịchọta vidiyo. Ma, ọ dị mfe ịkwụpụ, nke anyị ga-ekwurịta banyere taa. Gbanyụọ nlezianya ọchụchọ maka VKontakte. Ugbu a, anyị ga-ele anya iji gbanyụọ njirimara a. Nzọụkwụ 1: Ntọala na Desktọpụ Na ntanetị nchọgharị nke saịtị ahụ, agbanyụrịrị ọchụchọ achọta dị ka ndị a: Mepee taabụ "Video".
Wepu njehie "Iju Mmiri" VKontakte
Site n'iji ọrụ ụfọdụ mee ihe na netwọk mmekọrịta gị na VKontakte, ị nwere ike izute njehie "Iju Mmiri" nke na-eme n'ọnọdụ ụfọdụ. N'isiokwu a, anyị ga-ekwu maka isi ihe kpatara mmalite na ụzọ nke iwepu nsogbu a. Njehie "Iju Mmiri" VK Maka nmalite ọ bara uru ịkọwapụta na njehie na ajụjụ bụ nanị n'ihi arụmọrụ zuru oke nke usoro nchebe akpaka nke saịtị VK.
Ịmepụta ọnọdụ alụmdi na nwunye nke VKontakte, ma ọ bụ nanị dị mkpụmkpụ dị ka SP, bụ ihe a na-emekarị maka ọtụtụ ndị ọrụ nke netwọk mmekọrịta a. Otú ọ dị, e nwere ndị mmadụ na Intaneti bụ ndị ka na-amaghị otú ị nwere ike isi gosipụta ọnọdụ di na nwunye na ibe gị. N'isiokwu a, anyị ga-emetụ aka n'isiokwu abụọ dị na otu oge - otu esi eme ka otu ụlọ ọrụ na-arụkọ ọrụ, na ụzọ nke ichebe ọnọdụ alụmdi na nwunye edozi site na ndị ọrụ na-elekọta mmadụ.
Mepụta ma hichapụ ihe ndetu VKontakte
Netwọk mmekọrịta dịka VKontakte, dị ka ọtụtụ ihe ndị yiri ya, enwetawo ọtụtụ mmelite, nke nwere ike ịmegharị akụkụ ụfọdụ ma ọ bụ wepụ ya kpamkpam. Otu n'ime ngalaba ndị a gbanwetụrụ bụ ihe edeturu, banyere ọchụchọ, ihe okike na nhichapụ nke anyị ga-akọwa na nke a.
Esi esi na VKontakte budata gif
Taa, na netwọk mmekọrịta netwọk VKontakte, ọtụtụ mgbe ị nwere ike ịhụ foto ndị na-akpali agụụ mmekọahụ nke a na-apụghị iji nanị na saịtị ahụ, mana ebudatara. Otu esi budata VN gifs Ịnata ihe ọ bụla gif ọ bụla ga-ekwe omume n'agbanyeghị ebe ọ nọ, n'okpuru nwepụta aha "GIF."
Anyị na-ehichapụ foto VKontakte
Ihichapụ foto na netwọk mmekọrịta bụ VKontakte bụ otu ihe ọ bụla onye ọrụ ọ bụla, onye na-arụsi ọrụ ike, abịala. Otú ọ dị, n'agbanyeghị nke a, ọtụtụ ndị ka maara nanị ụzọ ndị bụ isi nke ehichapụ ihe oyiyi ahụ ebudatara ozugbo, ebe e nwere ụzọ ndị ọzọ. Usoro nke ihichapụ ihe oyiyi na-adabere na ụdị nke ebudatara foto na mmekọrịta.
Iji njirimara vidiyo na VK
N'otu oge, nchịkwa nke netwọk mmekọrịta ndị mmadụ na VKontakte gosipụtara na o nwere ike ime ka vidiyo na oku dị egwu, bụ nke mechara bụrụ ihe dị ntakịrị. Otú ọ dị, n'agbanyeghị enweghị ọrụ a na njirimara zuru oke nke saịtị ahụ, taa ngwa ngwa ngwa ọrụ na-enye gị ohere ịkpọ oku.
Mmecha niile VK sessions
N'ezie, ọtụtụ ndị ọrụ nke netwọk mmekọrịta dị na VKontakte chere ihu n'ọnọdụ dị otú ahụ, mgbe ọ dị oké mkpa iji mezue sessions niile n'otu oge (dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụrụ na e nweghị ekwentị nwere akwụkwọ ihuenyo na nzuzo nzuzo, wdg). N'ụzọ dị mma, nchịkwa nke ọrụ ahụ enyewo ohere yiri nke ahụ.
Anyị na-atụgharị ihe oyiyi nke VKontakte
Mgbe ụfọdụ, mgbe ị na-ebuga foto ọhụrụ na netwọk mmekọrịta dị na VKontakte, e nwere mkpa maka obere edezi ha, nke gụnyere ịgbanwe agbanwe nke ntụgharị. Dị ka akụkụ nke isiokwu a, anyị ga-ekwu banyere ụzọ maka idozi nsogbu ahụ, ma tupu e bulite foto ahụ na mgbe a gbakwunyere ya na saịtị ahụ n'agbanyeghị ụbọchị.